Oonodoli bokwabelana ngesondo obufana nqwa nexabiso eliphantsi liyathengiswa kwaye uthenge unodoli wothando lokwenene weSexy
Thengisa ngexabiso eliphantsi
00 iintsuku 00 : 00 : 00
Ixesha eliqingqiweyo Intengiso eshushu+Ashlyn+153CM Amabele amakhulu+TPE Material unodoli wesondo
I-Mia +D Cup encinci esinqeni oonodoli bezesondo
I-Rayna - 150cm Thumela uTshintsho lweNwele + iMakeup yoMzimba + i-E-Cup Oyena unodoli weSilicone onexabiso eliphantsi kakhulu
Hot selling + 158cm Joelle + Long curly hair + Big chest + Melancholy little princess + Cheap TPE Love Doll
I-150cm+Monica iMakeup yoMzimba yasimahla + Thumela uTyalondo lweNwele + E-Cup Smooth Skin Medical Silicone 150CM Iimpundu isilingo iLungu lobufazi eliMnandi Ngoonodoli
153cm + Indie + Private Teacher + E-Cup High Quality Silicone Sex Doll
Intengiso eshushu yoBomi boDlalwano boBuntu oBucala
Uninzi lweZinto eziThengiweyo ezili-148CM ezikhulu eziBelekileyo zoBomi boBomi boBuntu
Ubungakanani boBomi Round Face Japanese Girl TPE Sex Doll
159CM Big Booty Sexy Beauty BBW TPE Sex Doll
Ibhombu enzima amabele amakhulu okulwa iNgcali ye-TPE ngesondo
165CM Big Silver Imilebe Irontech Silicone Sex Doll
158CM Big Cheasts Elegant Foreign Language Tutor Silicone Sex Doll
Ukuthengisa kweyona Dololi yoSini eyiyo
Xiomara - 166cm H-Cup TPE I-Sex eCheap unodoli weGolden Wig Iimpundu ezinkulu uMfazi otyebileyo
UBonnie - 165cm D-Cup TPE Unodoli wokwenyani oThengisiweyo wePonytail yeNwele eziMnyama
UHanna - 160CM Umbala Wengqolowa we-TPE Oonodoli beSini abaThengisiweyo
UZiqu-zintathu - 160CM H-Cup Huge Ass Full Silicone Irontech Dolls Sex
I-Evelynn-166cm C-Cup ye-Sexy Tight Swimsuit Thin Waist
I-Aaliyah-F-Indebe esinqeni esiNcinci iCwangcisa iTPE iWM Dolls
I-Emerson-157cm B-Cup Mini Boobs Tan Skin TPE WM Dolls
Millie-162cm Thin Sexy Beauty TPE WM Dolls
Lennox - Amabele amakhulu 163CM Sexy TPE WM Dolls
Sloane - 167cm E-Cup Sexy Stockings Tan Skin SE Dolls
Kinsley - 161CM/5ft3 Amabele amakhulu iSexy Beauty TPE Dolls zesini
UJosephine - I-172CM Iimpundu Iinwele Ezikhulu zeBlonde
I-Blair-172cm ye-D-indebe yebele enkulu ebiza amaxabiso aphantsi eWM
I-Aleksandriya-D yeNdebe eyi-140CM Thin Skin Skin yexabiso eliphantsi le-TPE yesini
Curme- 162CM E-cup WM NO.334 Head Tan Skin TPE Sex Doll
I-Mckenzie -I-156cm ye-B-yeNdebe ye-Big Ass yabantu abadala i-WM Dolls
I-Malia-173cm entle enkulu yeBele yoThando I-WM Dolls
I-Julianna-i-163cm ye-H-yeNdebe ye-Boobs enkulu yabantu abadala engabizi kakhulu
U-Amina-I-172cm ye-B-yeNdebe yothixokazi u-Waist WM Dolls
Ukuhlambalaza umzimba ngeTolls
I-3D yabantu abadala yokudlala Solid Half Torso Abafazi Imilenze 2 Hole Sex Doll
UMah 55CM TPR Torso Uthanda unodoli weSini esitshiphukileyo SQ-MA20019
Ukusebenza ngokuNgcono kweSondo ngeDolls yesikolo esimsulwa uXiaomei
Yeyiphi eyona dolophana yesayizi yobomi ilungileyo?
Ngaba unayo eyakho Unodoli wokwenene? Ngoku, ziindlela ezintsha eMntla Melika. Ukuthetha ngoonodoli, mhlawumbi uya kuqala ucinge ngoonodoli abanokungena. Kodwa lelo lixesha elidlulileyo. Oonodoli bakudala bayilwa ngoomatiloshe baseDatshi benkulungwane yeshumi elinesixhenxe ababekwa bodwa lulwandle kuhambo olude. Bafumanise ukuba iyakwazi ukuhlangabezana neemfuno zabo ngeendlela ezithile. Yenziwe ngamalaphu athungiweyo okanye iimpahla ezindala, aba nodoli bokuphulula amaphambili ngabona bangaphambi koonodoli besini banamhlanje. Ewe, ngokuhambela phambili kwetekhnoloji, bayasondela ebantwini bokwenyani. Kwiminyaka yakutshanje, iqela labavelisi, elikhokelwa zii-urdolls, livelise oonodoli bamva nje. Okwangoku, unodoli uthandwa kakhulu eMntla Melika naseYurophu.
Ngaphambi kokuba uthenge owakho unodoli. Kuya kufuneka uyazi ulwazi malunga needonki ezintsha zesini. Iwebhusayithi yethu iqulethe phantse zonke iintlobo zoonodoli bokwenyani. Oonodoli baseAsia banokubangelwa kukumanyana kwabo okanye abo bancuma abamsulwa abenza ukuba amadoda anegazi elishushu alangazelele uthando. Okanye mhlawumbi ufuna ukuba kunye nomtsalane kunye nokungaqhelekanga Unodoli wesini waseJapan. Isenokuba yinto oyithandayo ye-anime kulutsha lwakho. Apha siza kufunda ngembali yoonopopi, ukhetho lwangoku kwimarike kunye neendlela ezahlukeneyo xa ukhetha unodoli.
Ukusukela ngo-2012, oonodoli besini abangathathi ntweni kwimarike bathathe indawo yoonodoli be-TPE kunye nonodoli abicah. Thermoplastic elastomer substitutes called TPE ziqhele ukusetyenziswa, ngakumbi kuba unodoli wokwenene wesini ezenziwe ngabavelisi zingcono kunomgangatho ophezulu. Kubiza ixabiso eliphantsi ukwenza izinto zokudlala ezenziwe ngeplastikhi yeplatinic ephilisiweyo ebizayo. Abanye abavelisi bonodoli banamhlanje bongeze inkqubo yokufudumeza ngaphakathi kwiidoli zabo ze-silicone.
Iidoli ze-TPE kunye needonki ze-silicone nganye inezibonelelo zazo. Izinto ze-TPE zitshiphu. Ixabiso lonodoli wokwabelana ngesondo okwenyani elenziwe ngezinto ze-TPE liphantsi kunexabiso ledoli yesilicone. Ukuqina kunye nokuthamba nako kulungile. Izinto ze-silicone zibiza kakhulu, kodwa oonodoli abicah bahlala bomelele kwaye basondele kakhulu kwinyani. Iidoli ze-silicone zazenziwe nge-silicone ephilisiweyo, kodwa itekhnoloji yeplatinam inobomi benkonzo ende kwaye ayithambekele ekukrazuleni nasekubambeni.
Abathandi boonodoli bokwabelana ngesondo okwenyani banokukhetha ama-brothels angama-70 eJapan kwaye bakhethe i-brothel yokuqala eYurophu ngo-Matshi 2017. Ngokombono wolawulo, oonodoli ngabasebenzi abafanelekileyo, bahlala belapha kuba abaze bagule, bahlala bekhangeleka belungile, banikezela ngazo zontathu imingxunya, akukho zikhalazo okanye imali eyongezelelweyo. Ezinye iinkampani zisebenzisa itekhnoloji efanayo nokwenza iithoyi zokudlala zenze oonodoli bomdaka. Ngokusetyenziswa ngokubanzi kwenkcubeko ye-Intanethi sisizukulwana esitsha, zininzi iiforamu zabaphengululi abasebenzisa amalaphu okanye ezinye izinto ukuzenzela ixabiso lonodoli.
Ngophuhliso oluqhubekayo loluntu, abantu bebefuna iindlela zokonwabela ubomi ngcono. Indlela yolonwabo iye yanda ngakumbi nangakumbi. Oonodoli besini abakwizinga eliphezulu zezona zinto ziphambili zivelisiweyo kwimpucuko yabantu. Ubungakanani obugcweleyo, indalo etyebileyo yendalo, owona msebenzi wayo ukwanelisa abantu. Ukuthenga nokusebenzisa oonodoli namhlanje kuya kusiba yinto exhaphake ngakumbi, njengokuba amafanasini enamalungelo awo. Abanye ngekhe babe ngabangenabuhlobo kuwe ngenxa yokuba usebenzisa unodoli wesini. Into omele uyazi kukuba lilungelo lakho eli.
Kuba ngakumbi nangakumbi abantu. Bajongeka njengabafazi bokwenyani. Ungaphila awona maphupha akho amnyama- ngomnye woonodoli bethu besini ababalaseleyo, unokukuzisela elona xesha lakho lokonwaba. Bajongeka njengowasetyhini wokwenene kwaye baziva ngathi ungumfazi wokwenene. ubungakanani besondo sonodoli ngoku bufana nobomi. Ngonwele lwayo lomntu, ulusu oluthambileyo, imbonakalo yobuso beemvakalelo kunye namagophe okulukuhla, kujongeka kungacacanga kumfazi wokwenyani ekuqaleni. Ubungakanani bobomi boonodoli besini benziwe ngononophelo kwaye bamodelwa ngabantu bokwenyani.
Ukuba ufuna ukuthenga thenga oonodoli bokwenene besini emadodeni, yeka ukubabukela kuba ukwindawo elungileyo. Ukusuka koonodoli abancinci nabathambileyo ukuya kwelona likhulu kunye nokucacisa eyona dolki yokudlala ngesondo: kukho zonke iintlobo zeencasa kuluhlu lwethu! Wonke umntu unokufumana unodoli wakhe awuthandayo, zininzi iimodeli ezahlukeneyo, zahlukile kwimathiriyeli, izixhobo nakwimbonakalo. Ngoonodoli bezesondo, unokuzama izikhundla ezahlukeneyo. Ke ngoko, ithathwa njengoluhlobo loqeqesho.
Ngenkqubela phambili yoluntu lwanamhlanje, abantu abaninzi ngakumbi bamkela oonodoli bezesondo, kwaye intengiso ye-sexdoll nayo ibone ukwanda okukhulu. Ubufanele ukufumanisa ukuba amashishini amaninzi athengisa oonodoli bokulinganisa besini, nto leyo eqhatha abathengi. Ivenkile ye-Urdolls ixhathisa ngokuqinileyo Ngolu hlobo lokuziphatha, unokuhlala uthemba ii-urdolls kuba sithengisa kuphela ii-sexdolls ze-pop ezinelayisensi esemthethweni.
Ukufika koDoli abatsha abaThengisa ngeSondo
Mhle uMdli weSondo oDutyuliweyo
UJessica-Dollhouse 168 E yeNdebe ye-EVO yoHlelo lwe-150CM yesondo
UJessica uhlawula kakhulu ulondolozo lweenwele. Igumbi lokuhlambela ekhaya linomgangatho okhethekileyo wokupholisa kunye ne-shampoo, kwaye uhlala usiya kwisalon. Ekuqaleni, isitayile seenwele sasitshintshwa rhoqo ngenyanga. Uhlobo olufanayo lweenwele alunakuhlala iinyanga ezintathu, kodwa lwalusoloko luziinwele ezinde ngexesha elithile. Ukuba ufuna umsebenzi ophucukileyo wombane, naye unawo. Uya kukhwela ngebhongo iqhude lakho elinzima kwaye alifunxe. Andinangqondo yokugabha. Ukusuka kwilungu lobufazi elichetyiweyo ukuya kwi-esile elihle, ungathatha nantoni na oyifunayo. Uyayazi indlela ajikeleze ngayo indoda kunye negumbi lokulala. Uthanda izinto ezintle, kwaye uhlala ekhangele phambili ekubonakaleni kweNkosana. Ujonge kakhulu kuthando lwesithandana. Ubushushu bentombazana encinci buhle kakhulu. Ubuntu bakhe bonwabile, kodwa ubuntu bakhe obunxungupheleyo busekhona. Kwaye abantu abanankathalo kwaye bahlala besenza izinto ezingalunganga. Ungunodoli wokwabelana ngesondo okwenyani kunye nentloko kunye nomzimba ongasuswayo.
Rin - Dollhouse 168 Sexy Chinese Chinese Amabele Big Big TPE sex Doll
URin ngumTshayina. Unomdla webhola we-F-cup omkhulu. Abantu abaninzi abanakunceda kodwa bafuna ukuyikhotha. Uyakhawuleza, ulungile, mhlawumbi ubanda kakhulu. Oku kuqhelekile kubahlobo abamngqongileyo. Wazalelwa kwintsapho eqhelekileyo kwikomkhulu. Uhleli eyintombazana ezimeleyo. Wemka ekhaya de waneminyaka eli-15 ubudala. Qala ukukhangela ubomi obulangazelelayo. Emva kokuba ephumile, wadibana neengxaki ezininzi. Kodwa akazange anikezele. Ngobulumko bakhe kunye nomdlandla, akukho nto inokumnqanda ekufikeleleni kwisakhono sakhe esipheleleyo. Ngokukhawuleza uya kuba namandla okubalelwa.
I-Athena-C yeNdebe esinqeni esincinci seNwele eziFutshane eziyi-165CM yoSayizi oPheleleyo weSondo
UAthena uvela eJamani. Ungunodoli opheleleyo kunye nomzimba onomtsalane. Isinqe sakhe sincinci, senza amabele akhe kunye neempundu zibukeke zimangalisa ngakumbi. Jonga ubuso bengelosi, amehlo anovelwano, vumela amehlo akho awise amathambo akhe amade kunye neempumlo ezintle kwimilebe yakhe ethambileyo, intamo yesini kunye ne-clavicle ebonakalayo. Ukuthetha ngasese, iphupha lakhe lihluthwe yonke into. Ufuna indoda eyomeleleyo ukuba imkhathalele kwaye imhlangabeze malunga neemfuno zesondo ezingonelisekanga. Unomzimba onomtsalane omvumela ukuba aphathe indlu kuba ungonwabela umtsalane onomdla kuzo zonke ii-angles. Ukuba ujonga olona luntu lubalulekileyo kwiqabane lakho, unodoli wokwenyani lolona khetho lwakho lubalaseleyo. Umdibaniso oguqukayo ugubungela isakhelo sensimbi kunye ne-TPE ephathekayo inikezela ngezona ziphumo zihle.
I-GYNOID 160cm idoli yesini
I-GYNOID 165cm idoli yesini
Kutheni uthenga kuthi?
Sinikezela abathengi ngenkonzo yokuthenga egudileyo ukunceda abathengi ukuba bafumane ezabo iidoli ezonelisayo. Xa unemibuzo malunga nodoli bezesondo, siza kukuphendula okokuqala. Iidoli zikhuselekile kunokwesini sokwenyani, awunakukhathazeka malunga nokukhulelwa okanye izifo ezidluliselwa ngesondo!
I-URDOLLS izibophelele ekwenzeni oonodoli abasebenza ngokwenyani. Zonke iidoli zenziwe ngokwabantu bokwenyani. Abakroli bethu baneminyaka engama-30 yamava okumodareyitha. Ubuso bonodoli nganye kunye nee-intshi nganye yolusu olubunjiweyo zenziwe yinkosi. Iqondo lokulinganisa liphezulu njenge-98% okanye nangaphezulu. Ngapha koko, inelungu elisengqiqweni kunye nelinobuhlobo elinokwenyani ukuvelisa ukufana kwe-99% okanye nangaphezulu, enika imvakalelo yokufana nomntu wokwenyani. Siqinisekile ukuba sikunika inkonzo ebalaseleyo kunye namava omsebenzisi amahle.
Siza kubamba imicimbi yokugcina kuyo yonke imithendeleko. Ukuzisa izibonelelo ezinesisa kubasebenzisi. Xa sibambe ukunyusa, ungasebenzisa ikhowudi yekhuphoni ukwenza ukuthenga. Fumana umnikelo womsebenzi. Ukuba u thenga oonodoli besini Ngexesha lomsitho, zihlala zikongela imali eninzi.
Sihambele phambili kwaye sahlukile kubuchwephesha bemveliso, kunye neqela elomeleleyo lamagcisa ezinto ezenziwe ngabayili bezakhono, iinjineli kunye neengcali. Kwinkqubo nganye yokuvelisa, sineemfuno ezingqongqo kakhulu kunye nolawulo lomgangatho wokulwela ukugqibelela. Ikuvumela ukuba wenze ngokwezifiso idoli ekumgangatho wobugcisa kwiindawo ezahlukeneyo zomzimba-uqinisekisa ukuba iyahambelana nomfanekiso wentombazana yakho oyiphuphayo.
Oodoli bethu bajongeka ngcono, baziva bokwenyani, kwaye bahlala ixesha elide! Yinto elula nje leyo. Unodoli ngamnye we-urdoll unendawo eneenkcukacha zesondo. Ulusu lwabo luthamba ngakumbi. Umzekelo, isifuba siyangcangcazela. I-TPE / i-silicone inokuqina okuzinzileyo kwaye yandisa ubomi bedoli.
Iidoli zethu zenziwe nge-TPE okanye ngezinto zesilicone. Uyilo olukhethekileyo lwesi sizukulwana sitsha sentsimbi engenasiphelo ephezulu-ngqo yegiya ejikelezayo ifana nomzimba womntu odibeneyo wamathambo. Inokwenza imilo eyahlukeneyo kunye nokuhamba njengabantu bokwenyani, bomelele, akukho lula ukunxiba kwaye kukhululeke. Itekhnoloji yophando lwenzululwazi ethe xhaxhe kunye nobugcisa obuchanekileyo bokuvelisa oonodoli abakumgangatho ophezulu. Kakhulu ukuphucula amava umthengi lowo.
Zonke iidoli ezivenkileni zethu zenziwe ngokomlinganiso wabantu bokwenyani. Ngokuqinisekileyo ubukhulu bomzimba womntu. Awuyi kumangaliswa yile nto, uya kucinga ukuba bangabantu abaphilayo. Unesiqinisekiso somgangatho wethu.
Unodoli wethu uqukethe amathambo esinyithi ngaphakathi. Kulula ukuzibamba nokunxiba, nangona ulusu lwabo oluthambileyo luchaphazeleka kuxinzelelo olugqithisileyo. Iimpawu zazo zihlala ixesha elide kunezinye oonodoli. Yiyo loo nto bephumelela abantu abaninzi. Ithambile kwaye ifikeleleka. Uthambile kwaye uzolule, uya kufumanisa ukuba isifuba sedoli kunye nehips ziyashukuma ngokulula xa ephulula umva nasemva.
Xa usenza unodoli wakho ngokwezifiso. Ungaqhagamshelana nathi ngoncedo nge-imeyile. Xa unodoli uhanjiswa, siza kukuthumela inombolo yokulandela umkhondo, kwaye sisebenzise iFedex kunye ne-DHL ukukhawulezisa ukuthunyelwa kunye nokuqinisekisa ukuhanjiswa okukhuselekileyo. Sithatha imfihlo yakho ngokungathí sina, ke akuyi kubakho zibhokisi ebhokisini, nokuba igama lenkampani lethu alibonisi. Inkqubo yokuvelisa unodoli ihlala ithatha iintsuku ezi-3 ukuya kwezi-8 ukuyigqiba. Ke unodoli wakho kufuneka afike kwindawo aya kuyo ngeentsuku eziyi-8 ukuya kwe-20 ngendlela ekhawulezayo yokuvelisa kunye nokuthumela emhlabeni.
Sinikezela ngeendlela ezahlukeneyo simahla kubathengi bethu, ke unokukhetha isitayile osithandayo ngokukhululekileyo. Unokukhetha isithandwa esifanelekileyo ocinga ngaso ngokusekwe kwiindidi zonodoli kwiwebhusayithi. Izinketho zodoli oqhelekileyo.
Zonke iidoli zethu zinokukhethwa ngokokukhetha kwakho (kubandakanya ubude, iinwele, umbala wesikhumba, amehlo kunye nezinye izinto ezininzi). Yila idoli yakho ekhethekileyo. Ukuba awufumani ndlela eyonelisayo, nceda unxibelelane nathi nge-imeyile okanye ngomnxeba, siza kukunika impendulo eyonelisayo.
Iinkqubo zethu zangasemva zikhuselwe kwaye sisebenzisa i-Paypal ukuqinisekisa ubumfihlo bakho kunye nokhuseleko. Akukho nto kwityala lakho elityhila uhlobo lokuthenga kwakho.
Zonke iidoli zesini kwivenkile yethu zihanjiswa simahla. Kwaye ungathunyelwa kuwo onke amazwe emhlabeni. Ixabiso olibonayo kwiwebhusayithi lixabiso lilonke olifunayo ukuze ube unodoli. Asiyi kukuhlawulisa imali eyongezelelweyo. Iindleko zokuhambisa ezifunekayo ukuhambisa oonodoli zonke zithwalwa sithi.
Oonodoli bezesondo baye baba yinto ebalulekileyo phakathi kwethu, kwaye zezona ndlela zisebenzayo nezonelisayo zokuphucula ubudlelwane phakathi kwabantu kunye nolonwabo ngokubanzi kubomi bezesondo. Ngophuhliso loluntu, abantu ngokuthe ngcembe bafumanisa ezinye izinto ezininzi ezenziwa ngoonodoli. Ziyasetyenziswa nangakumbi kwimfundo yabantwana ngesondo. Iidoli zinokusetyenziswa njengemannnequins kwiimodeli zobugcisa bomzimba kunye nemfundiso yezonyango. Abafazi abahle bahlala besetyenziswa njengee-mannequins kwishishini lefashoni. Ewe abantu abaninzi basebenzisa oonodoli ekufotweni nasekuqokeleleni. Uninzi loonodoli lusenokungasetyenziselwa iinjongo zesondo.
Kuya kufuneka uqonde ukuba ngowuphi na kwaye uthathe isihlalo sakho. Nokuba ungalufuna luphi uhlobo loncedo, ubomi bezesondo kunye neemfuno zobudlelwane bezesondo, oonodoli banokukunceda ngeendlela ezininzi. Konwabele ukubrawuza kukhetho lwethu olukumgangatho wehlabathi, sinoonodoli beethoni zolusu ezahlukeneyo, iinwele kunye nobuhlanga. Kwixesha elizayo, siza kubona unodoli wokwabelana ngesondo okwenyani onobukrelekrele bokufakelwa, ekulindeleke ukuba ubazise iimvakalelo ezifana nezabantu. Mhlawumbi kwixa elizayo wonke umntu uya kuba nonodoli ohlakaniphile ekhaya.
Iingcebiso kunye nezikhokelo
Siyavuya kakhulu ukukuzisa ngexabiso elifanelekileyo, eneenkcukacha, abicah ekumgangatho ophezulu okanye unodoli we-TPE. Emva kokwenza isigqibo esikhulu sokuba nodoli wakho wesini, kuya kufuneka wazi okuthile malunga nonodoli kunye neengcebiso kunye nezikhokelo zokufumana eyona doli intle. Silukhathalele ulonwabo lwakho. Iimveliso zethu zezona zidoli zinexabiso eliphezulu kwaye zifikelelekayo ezikumgangatho ophezulu kwintengiso yanamhlanje, kwaye amaxabiso abo afikelele kwinqanaba lomgangatho kunye neenkcukacha esizivelisayo ngexabiso elifanelekileyo. Sizimisele ukuqhubeka siphucula imvakalelo yokwenene yoonodoli kunye nokubonelela ngamaxabiso okhuphiswano kweyona midoli ibalaseleyo. Siyayichasa i-fakes kunye ne-surcharges ephezulu.
Oonodoli besini abanexabiso eliphantsi banokungeniswa kwaye banokusebenzisa umoya. Ngenxa yexabiso elifanelekileyo, abathengi abaninzi bakulungele ukungahoyi iziphene zayo. Kodwa emva kokusetyenziswa kwemali encinci, bahlala beqhekeka kwimigangatho. Embindini wexabiso lentengiso, oonodoli benziwe nge-vinyl eshinyeneyo okanye nge-latex enzima. Oonodoli ababiza kakhulu bahlala bekwenziwe nge-silicone okanye i-elastomer ye-thermoplastic. Iidoli ezenziwe ngezinto zesilicon zinokuba zezokwenyani. Njengonodoli wophawu lwe-GYNOID Doll, imodareyithe umntu wokwenene, inolusu olusebenzayo lwesikhumba (olufana nolusu olusetyenziselwa iziphumo ezizodwa zemidlalo bhanyabhanya), kwaye ikufutshane neenwele eziqhelekileyo (okanye ezizizo).
Khetha oonodoli abomeleleyo
Ngokoluvo lwam, ubomi ngamahla ndenyuka. Kuphela kusemva kokufumana ilahleko yomkhombe, apho ndazi ngakumbi ngovuyo lokunyuka kuvuthondaba. Konke okufuneka ukwenze kukufumana unodoli onokwenziwa ngokwezifiso. Qiniseka ukuba iinwele zedoli yakho, ulusu, amehlo, imilebe kunye nezinye izinto ziyilelwe ngononophelo ukubonisa ukubonakala kunye nokuziva kunokwenzeka. Ungaqala ukunqwenela ukuziva unomdla wokwenene, isikhalo esikwenza uzive wanelisekile. Qiniseka ukuba unodoli wakho wesini wenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu. Nokuba uyi-TPE okanye abicah.
Endleleni, mhlawumbi uya kuba ungancedi kwaye ulunge, kwaye kuya kubakho iinyembezi nokulila. Kodwa kuya kuhlala kukho amaxesha anjalo, unodoli uya kukuzisela iimvakalelo ezintle kwaye unike ukubetha kwentliziyo eyahlukileyo kunye nokuchukumisa kubomi obuqhelekileyo. Kuya kufuneka ucinge nangobufishism bakho xa ukhetha. Luhlobo luni lwesimbo sonodoli oluthandayo. blond? Ubisi olukhulu? Iimpundu ezinkulu? Ukunambitheka komntu wonke kwahlukile. Ukukhetha esikubonelelayo kulungile kubathengi bethu. Ekugqibeleni unokujonga uluhlu lwamaxabiso. Kuhlala kungumbono olungileyo ukongeza imali kuwe ukuze uhlale unoxolo lwangaphakathi kunye nokwoneliseka ngokwesondo. Asizukuvumela uhlawule ngaphezulu. Iindlela zokukuvumela wonwabe ngesondo kangangoko, kodwa ixabiso alizukuyonakalisa imali yakho. Ngapha koko, oonodoli banokukunceda ugcine umtshato wakho okanye impilo yengqondo.
Aba nodoli kulula ukubabeka kwaye banxibe, nangona ulusu lwabo oluthambileyo lusengozini yoxinzelelo olugqithisileyo. Ulusu luye lwadyobheka ngokulula ngedayi, ke kuyacetyiswa ukuba unxibe unodoli wakho omhlophe kuphela. Iidoli zinokunceda abantu bazo zonke izakhono, abantu abangakwaziyo ukwanelisa umnqweno onamandla wesini kubudlelwane obuqhelekileyo, abantu abanesifo okanye izifo ezosulela ngokwabelana ngesondo, abantu abafuna ukugcina ubudlelwane kunye namaqabane nokungasebenzi ngokwesondo, kunye nokufumana okungakumbi kubomi babo bezesondo Guqula kunye nemincili. Zingasetyenziselwa ukuzonwabisa okanye ngeenjongo zeshishini. Ke, oonodoli ayizizo nje izinto zokudlala zabantu abadala. Kuxhomekeka kwinjongo ofuna ukufumana ngayo oonodoli bezesondo okanye iithoyi zesini kwizixhobo, ezinye iindlela, kwaye ungalibali ukubonakala kwazo. Zithande sisiqalo sothando lobomi bonke. Abantu abaninzi balwela abanye ubomi babo bonke. Usizi novuyo, njengamanzi okusela, siyazi ukuba shushu kwaye sibanda. Zinike ithuba lokuzihlalela! Ukuthenga oonopopi, unokuhlala kakuhle.
Kokwakho, amava ngoyena ndoqo, kwaye ulwazi lwesondo lonodoli luya kukwenza ucele ngakumbi yonke imihla! Ukoneliseka ligama eliphakathi ledoli. Jonga umzimba wakhe kakuhle kwaye undixelele ukuba ubona ntoni. Oonodoli banokuzisa izibonelelo ezininzi kumadoda okanye kwabasetyhini abangatshatanga nakwizibini ezitshatileyo. Abasetyhini abaninzi bathenga oonodoli ukufota, ukuhombisa okanye isitayile. Abanye abathengi banamaqabane, kodwa bakwasebenzisa oonodoli besini ukuzama ingcinga ngaphandle kokulimaza ezinye iziqingatha ezibini. Ukongeza kwii-orgasms ezenza ukuba abasetyhini bahle ngakumbi kwaye babenomtsalane, kwaye banomdla ngakumbi ngokomoya, abasetyhini abahlala bonwabela i-orgasm abanako ukulinganisa inkqubo yehomoni yesondo, kodwa bomeleza nokuzikhusela komzimba. Umngcipheko womhlaza wamabele nowomlomo wesibeleko nawo uyonyuswa Umncinci kakhulu. Kule mizuzu, abantu abasadandathekanga, abasoyiki, bamamele ilizwi labo langaphakathi, babe ngokwabo, bangalalanisi, baphelise lonke ixhala kwilizwe langaphandle, kwaye balahle onke amathandabuzo malunga nabo.
Nerd caucasian indoda ephethe unodoli wesondo oshushu blonde
Unokuhlala usenza nantoni na oyifunayo ngaloo doll yesini
I-148CM yobungakanani bobomi beBonnie TPE yeDoll yeVidiyo
Imiyalelo yokusebenza kwedoli yesini okrelekrele
Abantu abadala kuphela (18+)
Le webhusayithi iqulethe izinto zabantu abadala kwaye ilungele kuphela loo minyaka ili-18 nangaphezulu. Cofa u-Enter kuphela ukuba ubuneminyaka eli-18 ubudala.